Kirby dia CMS izay nohavaozina amin'ny kinova 3.0 | Famoronana an-tserasera
Kirby dia nohavaozina amin'ny kinova 3.0 ho CMS hafa amin'ny WordPress
Tamin'ny herinandro lasa dia efa nozarainay taminareo rehetra ny safidy tsy maintsy hamoronana pejin-tranonkala iray. Tsy miresaka momba azy ireo isika Kirby, CMS tahaka ny WordPress izay nohavaozina androany lasa lasa ho an'ny 3.0.
Izahay dia miresaka momba ny CMS izay tsy dia malaza toa ny WordPress, fa eny afaka mirehareha ianao mba ho safidy matotra ampy hamoronana pejin-tranonkala miaraka aminy.
Kirby dia manana havaozina amin'ny kinova 3.0 miaraka amin'ireo fiasa vaovao 4 tokony horaisina:
Ny voalohany dia ny fahaizana ho customizable tanteraka: mifototra amin'ny Vue ny birao.
Ankehitriny ianao dia afaka mamorona pejin-tranonkala tsy misy lohateny. Tonga lafatra ho an'ny pejy fitobiana na ireo fampiharana amin'ny Internet izay hitantsika tato ho ato.
Mamorona pejy avy tahiry, API, JSON na karazana endrika hafa azo ampitaina amin'ny PHP.
Rafitra plugin vaovao.
Momba ny dikan'ny Vue, dia manome antsika safidy io afaka mamorona tranokala tena samihafa. Izay manokatra ranomasina ahafahan'ny CMS toa an'i Kirby. Arakaraka ny fahafaha-manolotra arosony, ny safidy bebe kokoa misy ho an'ny mpamorona sasany hanandrana an'ity CMS ity.
Ny teboka iray hafa sarobidy amin'i Kirby dia ny fahaizany mamorona tranokala amin'ny fiteny maro amin'ny fotoana iray na mandamina ny atiny mifanaraka amin'ny takian'ny tetikasa tsirairay. Miresaka momba ny CMS iray izay hanohy hanome zavatra betsaka horesahina isika rehefa mivoatra izany ary manohy hatrany ny ezaka ataon'ireo mpamorona azy ho lasa alternatera amin'ny WordPress.
Ny sasany amin'ireo hatsarany dia mora ny mampifandray rohy, sary na horonan-tsary maha CMS mifototra amin'ny fisie. Raha liana ianao dia manoro anao izahay tsy handany fotoana ary andramo izany. Azonao atao ny mametraka azy eo an-toerana na amin'ny mpizara fanandramana tsy miankina. Raha tianao izany dia tsy maintsy mandalo ny fividianana ny lisansa ianao: 89 euro isaky ny tranokala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Wordpress » Kirby dia nohavaozina amin'ny kinova 3.0 ho CMS hafa amin'ny WordPress
Ireo sokajy enina lehibe amin'ny famolavolana toetra
Adobe dia mahazo Allegorithmic, orinasa mitarika amin'ny fanovana 3D ho an'ny filalaovana, sinema ary maro hafa